ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းမိုက်ခရိုနင်းစက်သည် မျက်နှာနှင့်လည်ပင်း အပြည့်ဖြင့် ကော်လာဂျင်နှင့် အီလက်စတင်တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ အရေပြားအောက်ရှိ အလွှာ5လွှာမှ အမျှင်တစ်ရှူးအသစ်များ ပေါက်ဖွားလာကာ အရေပြားအသစ်၊ ကော်လာဂျင်အသစ်၊ အယ်လစတင်နှင့် သန့်စင်သောနေရာများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမျှင်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အရေပြားဆဲလ်များ။အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး အရေးကြောင်းများကို ချောမွေ့စေကာ ဟော်မုန်းဓာတ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်...
ဆံပင်ကို အမြဲတမ်း လျော့ပါးစေသောအခါတွင် လေဆာဖြင့် ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။⠀
အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Sincoheren 755nm alexandrite လေဆာ ၏ ဖောက်သည် တုံ့ပြန်ချက် ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ဆေးခန်းတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် လေဆာစက် ရှိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကံကောင်းပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်္ဂလိပ်/အိုင်ယာလန် အမွေအနှစ်ရှိသူမှ အီတလီ/အိန္ဒိယ/အာဖရိက အမွေအနှစ်ရှိသူထံ အရေပြားအမျိုးအစားအားလုံးကို ကုသနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသော အအေးပေးရွေးချယ်မှု2မျိုးရှိသည့်အတွက်လည်း ကံကောင်းပါသည်။cryogen နှင့် zimmer တစ်ခု။နှစ်ခုလုံး...
808nm Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း။
မျက်နှာအမွှေးအမျှင်များလွန်ကဲခြင်းသည် အမျိုးသမီးများတွင် မလိုလားအပ်သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။မေးစေ့၊ လည်ပင်း ဒါမှမဟုတ် နံပြားနဲ့ အပေါ်နှုတ်ခမ်းတွေမှာ ဆံပင်တွေ ပေါက်နေပြီး ဒါကို ဖယ်ရှားချင်ပါသလား။ထိရောက်သော လေဆာကုသမှုကို ယနေ့ စတင်လိုက်ပါ။မျက်နှာပေါ်ရှိ အမွှေးအမျှင်များကို လေဆာဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်၊ ကုသမှု တစ်ကြိမ်ပြီးပါက ရလဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ မြင်တွေ့ရသည်။လေဆာသည် ပွတ်တိုက်မှုတစ်ခုအတွင်း ၎င်း၏စွမ်းအင်အားလုံးကို ထုတ်လွှတ်သောကြောင့် ဆံပင်တိုင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်...
Ance ကို ရှက်သေးလား။
ဝက်ခြံကို ဖယ်ရှားဖို့ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို သင်ရှာနေသေးလား? စိတ်မပူပါနဲ့။ငါတို့က မင်းကို ကူညီနိုင်တယ်။IPL သည် Propionibacterium အရေအတွက်ကို နှိမ်နှင်းပြီး sebaceous gland ထုတ်လွှတ်မှုကို ဟန့်တားခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းကို ကူညီပေးသည်။၎င်း၏အပူလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်း မြန်ဆန်စေသည်။RF Microneedling RF Microneedling သည် အရေပြားပြုပြင်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သော်လည်း အတွင်းပိုင်းရှိ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသည် ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်...
Sincosculpt Neo နှင့် ပုံမှန် Sincosculpt machine အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
SincoSculpt Neo + Ems Tone ပေါင်းစပ်ကုထုံးသည် Non-Invasive Lipolysis၊ Hypertrophy/Hyperplasia၊ Skin Tightening Lymphatic Drainage ကုသမှုတစ်ခုသည် အကြိမ် 20,000 နှင့် ညီမျှသည်။တစ်မိနစ် 30 ကုသမှုသည် squats 20,000 လုပ်ခြင်းနှင့်တူသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။1 လအကြာတွင်ရရန်ခက်ခဲသော booty ရလဒ်ပိုထက်မြက်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး သင်သိမ်းထားတဲ့ ရလဒ်တွေကို ရယူပါ...
Inner Ball Roller စက်ကို သင်စမ်းပြီးပြီလား။
အတွင်းဘောလုံးကို ကြိတ်စက်သည် ဆဲလ်လူလိုင်ကို ကုသရန်နှင့် အဆီလျော့ချရာတွင် မြင့်မားစွာ ထိရောက်မှုရှိသော ထိုးဖောက်မဟုတ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အတွင်းဘောလုံးကို ကြိတ်စက်ဖြင့် ကုသခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုငါးမျိုး ပေးစွမ်းသည်- Cellulite အတွက် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အဆီလျှော့ချခြင်း အသားအရေ တင်းမာမှု နှင့် ကြွက်သားများ ရောင်ရမ်းခြင်း အရေပြားဆဲလ်များ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း Lymphatic Drainage Pain Relief (by ...
Sinco-Alex Alexandrite လေဆာ - အကောင်းဆုံးလေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းရလဒ်များနှင့် သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှု
အကောင်းဆုံးလေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းရလဒ်များနှင့် သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် အဓိကအချက်တစ်ချက်မှာ အသုံးပြုသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုတွင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် Sinco Alex-Yag လေဆာကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ဤစက်ပစ္စည်းသည် အခြားစိုးရိမ်မှုများကို ကုသပေးနိုင်ကြောင်း သင်သိပါသလား။Sinco Alex-Yag လေဆာကုသခြင်း- မလိုလားအပ်သောဆံပင်အကြောဒဏ်ရာများ ဆိပ်ကမ်းဝိုင်အစွန်းအထင်း Hemangioma Telangiectasia ပျံ့နီခြင်းသွေးပြန်ကြော ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောများ အရောင်ခြယ်ထားသောဒဏ်ရာများ W...
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ပျင်းနေပြီလား?သင်၏ spa တွင်ဖောက်သည်များသည်အဆီဆုံးရှုံးရန်အိပ်နိုင်သည်။ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်၊ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ LDL ကိုလက်စထရောများသော၊ အရေပြားပေါ်ရှိအကြောပြတ်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော collagen များအပါအဝင်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောကြောင့်အဝလွန်ခြင်းသည်ပြင်းထန်လာသည်။အဝလွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်တက်လာခြင်းမှာ သိသိသာသာ ...
ခန္ဓာကိုယ် ပန်းပု ကုသခြင်း
▪️FAT FREEZING CRYOLIPOLISIS – Coolplas ဤသည်မှာ တင်းမာသောအဆီများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် မထိုးဖောက်နိုင်သော ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။စက်သည် အဆီများကို လက်ထဲသို့ ဆွဲငင်ပေးသည့် အထူးအေးခဲနေသော pad ကို အသုံးပြု၍ နာကျင်မှုကင်းသော ခံစားချက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ကုသသည့်နေရာများ- ဝမ်းဗိုက်၊ နံနံပင်၊ ပေါင်၊ မေးစေ့၊ နောက်ကျော၊ လက်မောင်း၊ ငှက်ပျောလိပ်များ (တင်ပါးအောက်)။▪️CAVITATION – Kuma ပုံသဏ္ဍာန် ကုသမှုသည် ကွဲထွက်စေရန် အာထရာဆောင်းလှိုင်းများ ပေးပို့သည်...
HIFUဒါက "ခွဲစိတ်မှုမဟုတ်တဲ့ မျက်နှာကို မြှင့်တင်ခြင်း"
HIFUဤသည်မှာ ခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး တင်းရင်းစေရန် အချိန်-စမ်းသပ်ထားသော အာထရာဆောင်းစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး သင့်နဖူးမှ သင့်ရင်ဘတ်အထိ နုပျိုသောအသွင်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။အသက် ၅ နှစ်လောက် ပိုငယ်ပြီး ခွဲစိတ်မှုမဟုတ်တဲ့ မျက်နှာကို မြှင့်တင်ပေးတယ်လို့ ခေါ်ဆိုကြပြီး ဒီကုသမှုကို နိုင်ငံပေါင်း 90 ကျော်မှာ လည်ပင်း၊ မေးစေ့အောက်နဲ့ မျက်ခုံးပေါ်ရှိ အရေပြားကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အပြင် လီရဲ့ အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ .။
Inner ball roller စက်ဆိုတာဘာလဲ။
Inner ball roller စက်ဆိုတာဘာလဲ။အတွင်းဘောလုံးကို ကြိတ်စက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်တူရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် lymphatic drainage ကိုတိုးတက်စေရန်၊ သွေးလည်ပတ်မှုတိုးစေရန်၊ cellulite မြှင့်တင်ရန်၊ cellulite ကိုလျှော့ချရန်၊ အိုမင်းခြင်း၏နောက်ပြန်သောလက္ခဏာများ၊ ကြွက်သားအေးစက်မှုနှင့် detoxification ကုသမှုအတွက် ဆန်းသစ်သော compression micro-vibration ကိုအသုံးပြုသည်။မျက်နှာရော ခန္ဓာကိုယ်မှာပါ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အများဆုံး p...
ပျော်ရွှင်စရာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး - Topsincoheren အဖွဲ့
လေးစားအပ်ပါသော customer များ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်ဖြစ်သည့် ဇန်နဝါရီလ 31 ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့အတွင်း စတင်ပါမည်။ ကြိုတင်မှာယူထားရန် အကြံပြုထားပြီး ထုတ်လုပ်မှုအကြိုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း သင့်လျော်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤကာလအတွင်း ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။မင်းရဲ့အဆင်မပြေမှုအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။Topsincoheren အဖွဲ့အား လေးစားစွာဖြင့်